What does ngiyabonga in German, What does thank you mean in German? Bafundi abathandekayo, kule ndatshana sizofunda ukuthi ngiyabonga ngesiJalimane. Ezihlokweni zethu ezedlule, sifake izindlela ezinjalo zokukhuluma ezisetshenziswa kakhulu empilweni yansuku zonke. Manje ake sibone amagama athile asho ukuthi ngiyabonga ngesiJalimane.
Intschuldigen Sie, bitte
Amagama asho ukuthi ngiyabonga ngesiJalimane futhi nezimpendulo ezingaba khona zingenhla. Sifisela wena impumelelo ezifundweni zakho zaseJalimane.
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni ezi-2 ezedlule, ngo-Okthoba 12, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoDisemba 4, 2021.
Amagama esiJalimane aqala ngohlamvu F